Uthando lweKhabhine luzolile kwaye luyimfihlo kuwe.
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguMai
Love Cabin yikhabhathi entle eyi-500 sq ft ebekwe emva kwendlu enkulu. Igumbi lokulala linebhedi enkulukazi, kunye neengcango ezinkulu ezityibilikayo ezivuleleka kwiveranda ethandekayo eyakhelwe kumthi wesitrasi. Igumbi lokuhlala linesihlalo sothando kunye nebhedi yesofa yobukhulu bokumkanikazi, kunye namakhethini amnyama efestile. Ikhitshi eligcweleyo lineekhawuntari ezintle zegranite, kunye nefriji enobungakanani obugcweleyo enamanzi kunye ne-ice dispenser.
Iincwadi zokuqala ezingama-50 zokubhukisha kwiKhabhinethi yoLuthando esandula ukwakhiwa ziya kufumana ibhotile yewayini.
Ikhabhathi iphangaleleyo inophahla oluphakamileyo, ineefestile ezinkulu eziqaqambileyo, ezinokujikwa kusetyenziswa iikhethini ezimnyama. Ikhabhathi ibekwe kwiyadi enkulu engasemva ecaleni kwegadi entle enencindi, kunye nepergola apho unokuvuna iidiliya ezijingayo ngexesha lasehlotyeni.
\_u00A0Ibhedi enkulu eyi-1, isofa ekwayibhedi eyi-1, iisofa eziyi-2
Indawo entle ethuleyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Mai
I-Love Cabin yahluke ngokupheleleyo kwindlu enkulu. Ungakonwabela ubumfihlo kunye nokuzola kwekhabhathi kunye neepatiyo zayo ezimbini ngasemva nangaphambili, okanye uze ujinga phantsi phantsi kwe-pergola kwipatio esezantsi.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- El Sobrante